Homeसमाचारनायिका दीपिकाको सबैलाई चकित पार्ने कोड भाषा, कोडका रुपमा ‘विवाह’ शब्दको पनि प्रयोग
October 1, 2020 admin समाचार 13611
दीपिका पादुकोण सहित राकुल प्रित र नायिका सारा अली खान यति’बेला निकै तना’वमा छन् । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको मृ’त्युको अ’नुसन्धान सुरु भएसँगै उक्त अनु’सन्धानसँग जोडीएर लहरो तान्दा पहरो नै थर्किन पुगेको छ । ड्र’ग्स प्रकरण’मा हाल नार्कोटिक्स सेन्ट्रल ब्यूरो एनसीबीले २० जनालाई प’क्राउ गरेर सुक्ष्म गतिमा अनु’सन्धान गरिरहेको छ ।
एनसीबीले अनु’सन्धानको सिलसिलामा चर्चित अभिनेत्रीहरु दीपिका पादुकोण, सारा अली खान र श्रद्धा कपुरलाई सोध’पुछ गरेसँग यि नायिकाहरु अहिले थप दबा’ब र त:नावमा देखिएका छन् । उनीहरु तना’वमा देखिनुको खास ड्र’ग्स प्रक’रणका समाचारहरु छरपस्ट हुनु र अर्को पारिवारिक कारण पनि हो ।
दीपिकाका पति रणवीर सिंहले आफ्नी पत्निलाई यो विषम परिस्थि’तीमा साथ दिँदै गोवाबाट मुम्बई’सम्मनै सँगै आए भने नायिका साराकी आमाले पनि छोरीलाई अहिलेसम्म एक्लै छा’डेकी छैनन् । अ’नुसन्धानका क्रममा गएको शनिबार एनसीबी’सँगको कुराकानीको बारेमा दीपिकाले धेरै खुला’सा गरेकी छिन ।
विगत धेरै दिनदेखि दीपिकाको ड्र’ग च्याटको बारेमा अनु’सन्धान गर्दा २०१७ को ड्र’ग्स च्या’टमा दीपिकाले माल भनेर हामी सिग’रेट वा ह्या’स र बि’डीका प्रकारको चुरोट’लाई भन्ने गरेको जवाफ दिएकी छिन् ।
पातलो सिगरे’टलाई ह्यास र मोटा सिग’रेटलाई बि’डी भन्ने गरेको समेत अनु’सन्धान अधिकारीसँग दीपिकाले बताइन् । अनु’सन्धानमा, दीपिकाले आफ्नो कोड शब्दलाई औचित्य दिन उनले धेरै तर्क गरेको र उनले भनिन् हामी सिग’रेट पिउँछौं, तर तिनीहरू ड्र’ग होइन्।
आफ्नो कोड शब्दलाई अन्यथा नठान्न आग्र’ह गर्दै उनले धेरै तर्क दिँदै भनिन् हामीले फिल्म उद्योगमा एक अर्का’सँग कुरा गर्नका लागि धेरै कोड शब्द प्रयोग गर्ने गरेकाछौँ । पनिर र अर्को क्विक्ली, म्यारे’ज जस्ता कोड शब्दमा गरिएको शब्दको उत्तरमा दिपी’काले यो लामो र छोटो सम्बन्धको लागि प्रयोग गरिएको शब्दाव’ली हो ।
क्विक्ली’को अर्थ छोटो सम्बन्ध, विवाह भनेको लामो सम्बन्ध भएको उनले अनु’सन्धान अधिकारीहरुलाई जानकारी दिइन् । दीपिकाले दिएको कोडको अर्थ उनकी म्याने’जर करिश्माले दिएको उत्तर पनि एउटै भएको बताइएको छ ।
June 16, 2021 admin समाचार 4703
August 28, 2020 admin समाचार 17993
चौध’री ग्रुपका अध्यक्ष तथा सांस’द विनोद चौधरी’लाई कोरोना पुष्टि भएको छ। चौधरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफुलाई कोरोना पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् । पछिल्लो समय काठमाडौ लगायत मुलुकका विभि’न्न शहरमा प्रतिष्ठित ब्यक्ति’हरुका कोरोनाको प्रभावमा परेका
May 16, 2021 admin समाचार 6173
गर्मी मौ’सममा सजिलै पाइने फल हो खर्बुजा । खर्बुजामा ९२ प्रतिशत पानी हुन्छ । जसले हाम्रो शरीरमा आ’वश्यक पानिको मात्रा पुरा गर्छ । रसीलो र मिठो हुने ख’र्बुजामा भिटामिन ए र बी, एन्टिअक्सिडेन्टको साथै फोलिट
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (242040)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229943)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (227946)